Faadumo Dayib oo laga reebay guddiga anshax ilaalinta doorashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaFaadumo Dayib oo laga reebay guddiga anshax ilaalinta doorashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya
February 1, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Marwo Faadumo Qaasim Dayib ayaa horey u sheegtay in ay u tartamayso madaxweynaha Soomaaliya. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Marwo Faadumo Qaasim Dayib ayaa laga reebay guddiga anshaxa ilaalinta ee doorashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, sida ay ku sheegtay qoraal ay ku daabacday boggeeda rasmiga ah ee Twitter-ka.
Guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka Maxamed Cumaan Jawaari ayaa dabayaaqadii asbuucii lasoo dhaafay magacaabay guddiga ilaalinta anshaxa doorashada oo ka kooban sagaal xubnood.
Faadumo Dayib ayaa sheegtay in fariin qoraaleed ay ka heshay Cabdikariim Xaaji Cabdi Buuxe oo ah xoghayaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya loogu sheegay in dib u eegis lagu sameeyay tirada xubnaha laga reebay iyada.
“Hadda waxaa la igu wargeliyay in aanan kasii mid ahaan doonin guddiga. Waxaana u malaynayaa in aynu wada ognahay sababta. Ima ay aamusin karaan, ima ay iibsan karaan.” Ayay Faadumo Dayib ku qortay boggeeda Twitter-ka.
Waxay sheegtay in ay u malaynayso in musharax raba in uu dib u soo noqdo uu go’aansaday in laga saaro liiska iyada.
“ 23-ka musharax oo kale ma jiro mid ka walaacay magacaabidayda guddiga. Badankood waxay isoo gaarsiiyeen hambalyo inskatoo ay baqdin jirto,” ayay tiri Marwo Faadumo.
“Waxay u muuqataa musharax rajo ka qaba in uu dib u soo noqdo in uu ku adkeystay in la iga saaro liiska. Taasi waa awood ku tumasho cad. Muxuu ka baqayaa musharaxaas?” ayay ku dartay.
Faadumo Qaasim ayaa horey u sheegtay in ay u tartamayso madaxweynaha Soomaaliya, balse waa ay ka hartay iyada oo hab u socodka doorashada ku tilmaamtay mid ay hareeyeen musuq-maasuq.
February 26, 2017 Cabdikariim Xuseen Guuleed oo arrimo caafimaad isaga casilay madaxweynenimada maamulka Galmudug
February 27, 2017 Ugu yaraan afar askari oo ku dhaawacmay weerar dablay Al-Shabaab katirsan ay ku qaadeen bar-kantarool kuyaala gudaha Boosaaso
RW Sharmaake: Waxaan ka codsanayaa dowladdaha deriska in ay faraha kala baxaan arrimaha doorashada Soomaaliya